I-iPhone itshixiwe yi-IMEI -fumanise ukuba ngaba ibiwe i-iPhone
iPhone itshixiwe IMEI
Kweli phepha unakho fumanisa ukuba i-iPhone itshixiwe yi-IMEI. OKANYEn I-iPhone inokutshixwa yi-IMEI kuba yiyo ibiwe, ilahlekile okanye ngenxa yetyala kunye nomsebenzisi.
Jonga ukuba bayakuthengisela i-iPhone exeliweyo Ngaphambi kokuba uyithenge. Iifowuni ezitshiweyo ze-IMEI azinakusetyenziswa nangayiphi na into ephetheyo kwaye kwiimeko ezininzi ayinakuvulwa.
0.1 IPhone itshixiwe okanye ibiwe?
1 Uyazi njani ukuba i-iPhone ibiwe
2 Ngaba unokuvula i-iPhone itshixiwe yi-IMEI?
IPhone itshixiwe okanye ibiwe?
Sebenzisa le fomu ilandelayo ukufumanisa ukuba ngaba i-iPhone itshixiwe okanye ibiwe:
Uya kufumana yonke idatha ye-iPhone kwi-imeyile enxulumene neakhawunti yakho ye-Paypal okanye i-imeyile oyibhalayo ukuba uhlawula ngekhadi letyala. Ngokwesiqhelo uyakufumana ulwazi ngaphakathi kwemizuzu emi-5 ukuya kweli-15, kodwa kwiimeko ezithile kunokubakho ukulibaziseka ukuya kuthi ga kwiiyure ezi-6.
Ingxelo oya kuyifumana iya kufana nale:
Inani lothotho: AB123ABAB12
Umzekelo: IPHONE 5 16GB EMNYAMA
I-IMEI ephawulwe njengebiweyo / ilahlekileyo kwindawo yogcino lwedatha ye-Apple: Hayi / Ewe
Kananjalo ukuba unqwenela ungajonga ukuba kunjalo itshixiwe yi-iCloud, yeyiphi inkampani eyakho i-iPhone, ukuba inekhontrakthi esisigxina kwaye inokuba njalo vula nge-IMEI Ngokukhetha ukhetho ekuhliseni intlawulo, kuya kufuneka uhlawule kuphela kancinci ukwandisa olu lwazi.
Uyazi njani ukuba i-iPhone ibiwe
Kubaluleke kakhulu ukuba xa uthenga isixhobo esitsha sesandla se-Apple iPhone sikufumanise ngokufanelekileyo ukuba ngaba le iPhone itshixiwe yi-IMEI. Esona sizathu siphambili sokuba iinkampani zikhethe ukuvimba isixhobo esiphathwayo ngokusebenzisa ikhowudi yayo ye-IMEI ngenxa yokuba umnini wayo eye wayilahla okanye wayiba ngokungekho mthethweni. Kungenxa yoko le nto kufuneka siqiniseke malunga nokunyaniseka kwekhowudi ye-IMEI edityaniswe kwisixhobo, ngaloo ndlela siqinisekisa ukuba imvelaphi yayo isemthethweni ngokupheleleyo.
Kungenxa yoko le nto inkonzo esiyinikezelayo izakuvumela ukuba ufumanise kwangoko ukuba ingaba i-iPhone oceba ukuyithenga ayivalwanga na okanye hayi. Ukuthintela ubuqhetseba obunokubakho kunye nokufunyanwa kwesixhobo esinemvelaphi engekho semthethweni.
Ngaba unokuvula i-iPhone itshixiwe yi-IMEI?
Ngokubanzi, ziinkampani zeefowuni ezinamandla okutshixa kunye nokuvula izixhobo ngekhowudi ye-IMEI. Kungenxa yoko le nto, ukuba sifuna ukuvula i-iPhone eyayikade ibhlokiwe yi-IMEI, Siza kuya ngqo kwinkampani yeefowuni ejongene nokuvalwa, ukuqinisekisa ngokusesikweni ukuba isixhobo eso sifunyenwe kwaye sisesandleni somnini waso osemthethweni, umzekelo, ungasebenzisa ii-invoyisi ezifanelekileyo zokuthenga.
Kungenxa yale nto ichazwe ngasentla, ukuba sikunika le nkonzo eya kuthi ikunike ithuba lokwazi kwangoko ukuba I-iPhone oceba ukuyithenga itshixiwe nge-IMEIGcwalisa ngokulula ulwazi oluhambelana nekhowudi ye-IMEI yesixhobo ofuna ukusithenga ngale ndlela ilandelayo, kunye ne-imeyile apho ufuna ukufumana ingxelo yempendulo apho uya kuyazi imeko yebhloko ye-IMEI. Kuphela ngokugcwalisa idatha kwifom apho uyakufumana i-imeyile nengxelo yedatha eceliweyo malunga nemizuzu elishumi elinesihlanu (kwezinye iimeko ezithile inokulibaziseka ukuya kwiiyure ezi-6).